Welcome to Aayaha Nolosha » TUUG GURI UU XADI RABEY DAQIIQADO KADIB WAARDIYE KA NOQDEY!!!.
TUUG GURI UU XADI RABEY DAQIIQADO KADIB WAARDIYE KA NOQDEY!!!.
July 10, 2018 - Waxaa Qorey : Mohamed farah -
Laba saac iyo kabadan ayey darbiyada qaqabsaneysay iyada oo taaha ka baxaya aad yaabto, dhididkii ka soo daateyna uu dharkeddii qooyey, Waxa ay halis u aheyd in ay isku dhimato, waxaana ku soo kululaadey Fooshii iyada oo aan haysan cid Caawisa.
Amin ay naf ka samarsantahay in ay dariska u qaylisana ay isku daydey balse ayna codkeedu dibnaheeda dhaafeyn ayaa Shanqar ay albaabka ka maqashey iyo in la ruxayo, balse hadana dhagaheeda ayey u qaadatey, saa cid og oo u imaanba ma jirto Waana Saq dhexe oo habeenimo dariskuna wada hurdaan.
Xaalad adag ayey gashey, oo ay nafta u yaabtey waxayse si lama filaan ah ay u aragtey qof ag taagan iyada oo Sariirta ku wareegeysaneysa janbiyadeedana cuskaneysa “War wa ayo?… Yaad tahay?!! ” ayey weydiisey ninkii oo soo fiirinaya aadna uga naxay qoftan Ooyneysa oo rafaadku ka muuqdo.
Waxa uuna ugu jawaabey “Waa Nin rabey in uu Guriga Xado” Markaa ayey lacag iyo dahab u tilmaantey Khaanada ay armaajada kaga jiraan, iyada oo ka codsatey in uu Isbitaal ula Ordo inta ayna isku dhiman, markiiba garbaha ayuu soo qabtey, goortii ay laamiga soo gaareen ayuu horey tagsi uga gacan haatiyey, markiiba Isbitaalkii ayuu geeyey, isaga oo u warbixiyey Umulisooyinkii kana Codsadey in ay Caawiyaa.
Qoftan dhibka soo martey ee uu halista ka soo badbaadiyey. Waxa uu ku soo noqdey gurigii oo uu Albaabadisii iyo daaqadihii hubiyey in uu bad qabo, goortii uu ogaadey in uusan dhib jirin ayuu waardiye ka galey isaga oo afartiisa gees ku wareegaya si fiicana u illaalinaya sidii uu Mushaar ku qaato.
Laba maalin kadib isaga oo sidii Ilaalo uga haya, ayaa Sabaad la keeney gurigii iyada oo wadata Wiil yar oo ay Dhashey, korka ayuu kala socdey ee markiiba waxa uu aadey Suuqa Dukaan uu wax ka qaadan jirey ayuu alaab uga soo qaadey Umushii. Sabaad aad ayey u faraxdey markii ay aragtey gurigii oo bad qaba, oo aan qaado ka maqneyn.
Saalax waxa uu yimid isaga oo bac weyn jiidaya oo uu u keenay Sabaad weyse garan weydey waxa ayna weydiisey “xageed iga soo salaantey” Waxaase uu u sheegey in uu yahay ninkii habeenkii u soo dhacay, isaga oo u sii raaciyey in uu guriga Waardiye ka ahaa labadii maalmood ee ay Isbitaalka ku jirtey.
Aad ayey ugu mahadnaqdey iyada oo u sheegtey in uu nafteeda badbaadiyey, waxa ayna damacdey in ay lacag siiso, wuuse diidey isaga oo ka dhaartey in uu ka qaato. Maalin walba ayuu soo booqanayey, waxa ayna gaareen heer ay sheeko dhex marto wax walbana ay isweydiin karaan. Sabaad ayaana Su,aashey waxa ku kalifey Tuuganimada.
Waxa uu ugu jawaabey “Aniga oo yar ayaan baabuur raacey, waxa aan ahaan jirey Kirishbooy, birta ayaan Macalin ku ahay, waxaana ahey Darawal aan u baahney Makaanik oo Ciladiisa xalin kara, mana jirto aqoon kale iyo Shaqo aan taas aheyn oo aan aqaan, Soomaalidiina waxaa ka soo hartey Qabyaalad oo qof walba kan xiga ayuu baabuurka u dhiiban waan waayey Cid shaqo i siisa, balse Waxaan kuu sheegi in aanan aheyn Tuug ee waxa aan isku furtaa marka aan nafta u yaabo, waxaana jira marar la ii keensado baabuur la Cilad bixin waayey markaa ayaan Xoogaa Muddo i haysa aa shaqeystaa” Waxaa kale oo ay Weydiisey Sababta uu gurigeeda ugu badbaadiyey isaga oo guran karey. Waxa uuna ugu jawaabey “Hooyadey ayaa loo sheegey dhowr jeer in aan dad wax ka xadey, waa ayna iga waanin jirtey Tuuganimada, marka ay i weydiiso waan dafiri jirey in aan dad xadey.
Maalintii dambe ayey ii yeertay oo igu tiri ” Waan ku jjeedaa oo Tuugnimo deyn meysid ee waxaan kugu waanin in aaadan wax ka dhicin Naag Ooyneysa oo dhiban waa Il Madoow oo uqubo ayaa kugu dhici ee sidoo kalena Qof da, ah oo Ciro leh isna ha u dhawaan ee ka carar waxooda dhibna ha u geysan in aad Caawiso mooyee, Marka dardaarankaa Hooyadey ayaan qabey oo illaalinayey”.
Aad ayey ula dhacdey hadalada Saalax waxa ayna ogaatey in uu runta uga waramey. Sabaad iyada oo Saddex bil oo Uur ah leh ayaa ninkeedu dhintey, oo waxa ay aheyd qof madax banaan, waxa ayna fursad u heshay in iyada iyo Saalax ay Sheeko Jaceyl dhex marto.
Sabaad waxa ay ku guuleysatey in ay Tuugsnimadii ka joojiso Saalax Waxa ayna Darawal uga dhigtey baabuur Weyn oo kuwa xamuulka qaad ah, oo walaalkeed lahaa waxa uuna markii dambe Jaceylkoodii sababey in ay is guursadaan. Waxa ay noqdeen Qoys si Sharaf leh u nool kuwaas oo Dariska ka tilmaaman loogana daydo Dhaqan Wanaaga ay kuwada joogeen iyo sida Sharafta leh ee ay isu qadariyaan oo noqotey Tilmaan jaceyl oo farta lagu fiiqo.
W.Q. Mohamed Farah Duurgal,